I-Artificial Intelligence ye-Accounting - Xriba
Amathuluzi okubalwa kwezimali
I-intelligence yokufakelwa egcina i-accounting yakho
I-Digital CFO esekwe Artificial Intelligence
Shintsha izinqubo ze-accountingInokwethenjwa kweBlockchainKusebenza njengoMeluleki wakho Wezezimali
Ubuhlakani bezokwakha ekusebenzeni kosomabhizinisi
I-XRiba nguIntelligence yokufakelwa uzalelwe ukuphatha Ukubalwa kwezimali zebhizinisi. Ihlola izinzuzo nokwethembeka kwe Blockchain, Xriba uyakwazi ukufunda i imibhalo yokubala, qaphela okuqukethwe kwayo bese uqopha ngokuzenzakalela imininingwane ye-sheet sheet.
Ngale ndlela isheshisa futhi yenze lula izinqubo zokuphatha, inikeze isikhangiso izinkampani ed osomabhizinisi un uhlelo oluphelele lwe-accounting amadeshibhodi ukuphatha ibhizinisi lakho.
Ukuxhaphaza konke okusemandleniIntelligence yokufakelwa, Xriba inikeza amathuluzi amaningi ukubala Ukubalwa kwezimali ezinkampani. Phakathi kwazo: ukubalwa kwe Isitatimende Somholo Esibikezelwe, Ukuhlaziywa kwamakhasimende nabaphakeli, iqoqo nesikhathi sokukhokha, ukubalwa kweI-VAT ngesikhathi sangempela nokuqagela okuzenzakalelayo kwe izintela ikusasa.
Isitatimende Somholo Esibikezelwe
La Ukubalwa kwezimali zebhizinisi ihlinzekela ukulungiswa nokulawulwa kwemininingwane eminingi. Ukubheka intuthuko yakho ibhizinisi futhi afinyelele imigomo yenzuzo oyifunayo, ekuqaleni konyaka ngamunye usomabhizinisi kufanele alandele indlela ngokudweba Isitatimende somholo ukubikezela yenkampani yakhe. Ukuze wenze lokhu, ungafaka i imali kanye ne izindleko kulindeleke unyaka kukholamu isabelomali. Inyanga ngayinye, lapho-ke, kufanele ifake i imali yangempela nezindleko, yenza ukulungiswa okudingekile ukuze kulondolozwe umzila osunguliwe.
I-XRiba lenza okungaphezulu kokuhlela nokubhekaukusebenza kwezomnotho kwenkampani. I-XRiba ibuye iqinisekise ukuthi ibhizinisi lakho linezinsizakusebenza ezidingakalayo zokuxhasa ibhizinisi lakho. Ukuze enze lokhu, ubeka iso kubo bonke imali engenayo futhi i Imiphumela, usebenzisa iqoqo nesikhathi sokukhokha. Kepha hhayi kuphela: I-XRiba hlela ukufinyelela kwesikweletu, ukusetshenziswa kwamakhadi wesikweletu imigqa yesikweletu yasebhange, izinsiza zomuntu wesithathu futhi ukunyakaza kwezezimali okuhlobene nokutshalwa kwezimali.
Ukuhlaziywa kwamakhasimende nabaphakeli
Hlaziya imikhuba yokusebenzisa imali yamakhasimende abo, izaphulelo ezixoxisanayo noma izimo zokukhokha ezinenzuzo eziningi zingaletha ukubonakala okukhulu inzuzo ngomzamo omncane.
Ukuyifinyelela, amabhizinisi kufanele anake bonke izinto zengeniso nezindleko okwabo ibhalansi, qinisekisa imali engenayo nezindleko, imfucuza kanye amandla. TheI-Artificial Intelligence Xriba ikuvumela ukukwenza konke amashidi athile wokuhlaziywa kwamakhasimende nabaphakeli.
Ukubalwa Kwentela Nentela
La Ukubalwa kwezimali zebhizinisi kumele ngaso sonke isikhathi ubhekane izintela e intela ukukhokha. Ngaphandle kwenele ukuhlelwa kwentela, ingxenye enkulu ye inzuzo yenhlangano bangalahleka ekukhokheni kwabo. Yazi umthelela we Fisco emabhokisini enkampani yakho isinyathelo sokuqala sokuthatha isenzo ku- ukuncishiswa kwentela. Usomabhizinisi olalelayo kufanele akhathazeke ngokunciphisa umthwalo kwi taxman ukwamukela wonke amathuluzi asemthethweni uhulumeni awavumelayo ukunciphisa intela.
Ukubekisa imali okuqagelayo
ukubala I-VAT ngesikhathi sangempela
L'Intelligence yokufakelwa angakwazi ukuxhumana nawe ngocingo
Ukufunda komshini eqhutshwa yi-a Umphathi womuntu okwandisa ukusebenza kwe-algorithm
Ezokuphepha kanye Nobumfihlo
Ukwethembeka kobuhlakani bokufakelwa
Ukulanda okuqondile nangokuzenzakalelayo kwakho konke Ama-invoice we-XML ikhishwe futhi yamukelwa yi-SDI neCassetto Fiscale
Faka ama-invoice wokuthenga, amaresidi entela, imali ekhokhwayo, imibiko yezindleko, izitatimende zabasebenzi kanye amadokhumenti asebhange nge-PDF - JPG - XLS - ifomethi yePNG, ngohlelo lokusebenza, i-imeyili noma emsamo.
Ukhipha amadokhumenti wokubala imali evela endawenikazi.
Ukubhaliswa okuzenzakalelayo kwe accounting yesikhathi sangempela sibonga u I-Artificial Intelligence algorithms
Ukutholwa kwedatha e Imibhalo ye-Accounting
I-Invoicing kagesi futhi kukhiqizwe ama-invoice kufomethi ye-XML
Ukunemba okufinyelela ku-100%
Isikhathi Amaresidi nezinkokhelo
Kufundza Umbhalo Ogcwele ukufunda nokulondolozwa kwamagama ku imibhalo yokubala
I-XRiba khuphula Blockchain futhi isiqinisekiso Ezokuphepha kanye Nobumfihlo. Ukulondolozwa kwedatha kuhlotshaniswa nokucwaswa kwendawo (GRS) okwenzelwe ukunikela ukuqina okungenani okungama-99,99999%. Lapho i-cryptography imininingwane iqinisekisiwe kusetshenziswa iphrothokholi Ukubethelwa kwedatha engabonakali.
Zonke izehlakalo ezenzeka database ziqoshwa ku irekhodi lokuhlola yemisebenzi egcina ithrekhiubuqotho besizinda semininingwane futhi ibona izinkinga ezingaba zokuphepha. Imininingwane ebucayi iphathwa ngokunakwa okukhulu, ngokuya ngemigomo ejwayelekile ye Ukuvikelwa kwemininingwane yomuntu (GDPR).
La Ukubalwa kwezimali zebhizinisi akukaze kube sezandleni eziphephile, ezisheshayo nezisebenza kahle. Xriba nguuchwepheshe wezezimaliit umeluleki wezimali nomeluleki othembekile kunabo webhizinisi ongabafisela. Xriba kuthathaIntelligence yokufakelwa ukunika ukubukeka kwe umeluleki webhizinisi savela kakhulu kunangaphambili. Futhi kubeka lapho usebenzela khona.
Cela Ukukhonjiswa Kwamahhala